धरौटीको प्रावधान हुनुहुन्न र नियमावली व्यवसायीको हकहितका लागि : उपाध्यक्ष भट्टराई - Nayapul Online
धरौटीको प्रावधान हुनुहुन्न र नियमावली व्यवसायीको हकहितका लागि : उपाध्यक्ष भट्टराई
प्रकाशित मिति : Thursday, September 27, 2018 nayapulonline
इडियु कन्सल्टेन्सी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त वैदेशिक अध्ययन परामर्श संस्था हो । यो कन्सल्टेन्सी पुतलीसडकमा रहेको छ । विशेषतः अमेरिकामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुलाई मध्यनजर गरेर यसले काउन्सेलिङ, डकुमेन्टेशन र लगायतका कामहरु गर्दै आइरहेको छ । वैदेशिक अध्ययन परामर्शका एकजना चितपरिचित अभियान्ता तथा इक्यानका उपाध्यक्ष देविदास भट्टराई इडियु कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, इक्यान, शैक्षिक अध्ययन परामर्श व्यवसाय र सरकारी कदमको पेरिफेरीमा रहेर उहाँसँग गरिएको छोटो भलाकुसारी :
इक्यान के हो ? Female Viagra no rx, acquire dapoxetine.
इक्यान वैदेशिक अध्ययन परामर्श व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो । यो व्यवसायीहरुको हकहितको लागि गठन भएको संस्था पनि हो । हाल यसमा ४०२ साधारण सदस्यहरु छन् । इक्यानले विदेशी कलेजहरुसँग परिचय गराउने र व्यवसायीहरुलाई विभिन्न तालिम तथा प्रशिक्षणहरु दिने लगायतका कार्यहरु गरिरहेको छ ।
हाल, वैदेशिक अध्ययन परामर्श लगायतका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली बनाइरहेको छ, यसमा इक्यानको धारण चाहि कस्तो छ ?
इक्यान विशेषगरि वैदेशिक दिने परामर्श दिने व्यवसायीहरुको संगठन हो त्यसकारण नयाँ व्यवस्थाले धरौटीको कुनै पनि प्रावधान राख्नु हुन्न । मन्त्रालयले बनाईरहेको नियमावली व्यवसायीको हकहितको पक्ष हुनु पर्दछ भन्ने मेरो विचार हो । यसले इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने वातावरण निर्माण गरि अनैतिकढंगका व्यवसायहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्दछ ।
प्रसङ्ग अव हजुरको इडियु कन्सल्टेन्सीतिर मोडौं । यसका विशेषताहरु कस्ता छन् त ?
इडियु कन्सल्टेन्सी सन् २००३ देखि नै प्रभावकारीढंगबाट वैदेशिक अध्ययन परामर्श
दिदै आएको कन्सल्टेन्सी हो । इडियुले विशेषगरि अमेरिकामा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि परामर्श र प्रोसेसिङको काम गरिरहेको छ । हामीले IELTS को कक्षा पनि संचालन गरिरहेका छौं । समग्रमा भन्नु पर्दा भरपर्दो र विश्वसिलो वैदेशिक अध्ययन परामर्श सेवा नै हाम्रो अहिलेसम्म स्थापित हुँदै आएको विशेषता हो ।
अन्तमा, वैदेशिक अध्ययनको लागि परामर्श र प्रोसेसिङ गरिदिने सेवा खोज्ने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई केहि भन्नु छ ?
इडियु कन्सल्टेन्सी विद्यार्थीहरुलाई भरपर्दो र प्रभावकारी वैदेशिक अध्ययन परामर्श र प्रोसेसिङ सेवा दिने उद्धेश्यले स्थापना भएको संस्था हो त्यसकारण विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुलाई सहजै सेवा दिनु हामीले हाम्रो दायित्व ठानेका छौं ।
(इडियु कन्सल्टेन्सीको मुख्य वेवपेजको लिंक )
बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिएको सरकारको निर्णयमा गगनको आलोचना
निर्मला हत्या प्रकरणः नयाँ खुलाशा मुचुल्कामा बाबुको ‘नक्कली’ औंठाछाप
आकाश र आश्माको रोमान्स ‘ड्रिम गर्ल’ मा
न्यून दृष्टि भएकी किशोरी छात्रावासमै पटक पटक बलात्कृत
प्रदेशस्तरीय अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम, ७ प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरुको चितवनमा भेला
प्रदेश नं ३ सरकारले प्रदेश मातहतका नौ जिल्ला अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्ति
नेकपाकाे सांगठनिक एकता अझै टुंगाे लागेन
पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा सुचिकृत इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय (सूचीसहित)
नेपालीको घरमा तीन वर्षमा विद्युत पुर्याउने गरी सरकारले काम गरेको छः उर्जामन्त्री पुन
आईसीसी टी–२० महिला विश्वकप : आज नेपालले आयोजक थाइल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा